OEM 3 Wavelongths Diode Laser Timaha Soo Saarida Mashiinka Soo Saarka iyo Warshada |Lumzues
Marka laysarka soo saaro, nidaamyada leh tignoolajiyada qaboojinta gaarka ah, qaboojiya maqaarka oo ka ilaaliya maqaarka in uu dhaawacmo oo ay gaaraan daaweyn aad ammaan iyo raaxo leh.
Xawaare Laser (dhererka hirarka 808nm):hirarka caadiga ah ee timaha ka saarista laysarka.Waa dhexgalka qoto dheer, celceliska awoodda sare iyo heerka celceliska sare ee daaweynta ayaa ka dhigaya mid aad u dhakhso badan.Sidoo kale, 808nm wuxuu leeyahay heerka nuugista melanin dhexdhexaad ah, taasoo ka dhigaysa mid badbaado u leh noocyada maqaarka madow, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon daaweynta gacmaha, lugaha, dhabannada, iyo gadhka.
√ Koronto dhaliyaha Laser-ka ee Premium Germany
Waxaan isticmaalnaa koronto-dhaliye sare oo laser ah oo laga keeno Jarmalka si loo hubiyo waxqabadka cajiibka ah, xitaa iyadoo la adeegsanayo xoojinta sare ee xaalado shaqo oo adag oo kala duwan.
Cimrigga koronto dhaliyaha laysarka oo aan ka yarayn 20 milyan oo tallaal.
Waxay ku qalabaysan tahay qaboojinta Semiconductor gaar ah sida hoos ku qoran, kaas oo dammaanad qaadaya awoodda si joogto ah u shaqeyneysa 7 * 24saacadood iyo yaraanta tamarta yar.
√ Badbaadada: Intaa waxaa dheer, CE Medical CE iyo ISO13485 la ansixiyay, tayada ayaa u adag sida dhagaxa.
√ Daawaynta Dhabta ah ee aan Xanuunka Lahayn: Heerkulka Sapphire wuu qaboojiyaa -5°C, oo ku raaxaysan daawaynta oo dhan.
√ Hufnaanta: Cabbirka goobta 15*15mm oo leh xawaraha ugu badan ee 20Hz, badbaadinta wakhtiga daaweynta.
√ Tas-hiilaadka: Software-ka caqliga leh oo leh hab-socodka menu fudud, oo aad u fudud in lagu shaqeeyo.
√ Shahaadooyin labanlaab ah: US FDA iyo Europe Medical CE
Tirada Laser-ka Germany Dilas Laser baararka
Dhererka Mawjada Laser 808nm
Cabbirka Goobta 15x15mm
Awood lagu qiimeeyay 1000W
Hore: Iibka Kulul Hi-Emt Ems Muruqyada Dhismaha Qalabka/Korantada Ems Murqaha Muruqa ee Caloosha
Xiga: Dhammaan Taxanaha Diodes Diode Laser Power Sare 755 808 1064Nm Laser Soprano Ice Price Machine